Xiddigaha Suarez iyo Benzema oo sugi la’a kulanka soo aaddan ee El Clásico, si ay u gaaraan Rikoorro muhiim ah – Gool FM
(Spain) 16 Okt 2019. Xiddig kasta wuxuu doonayaa inuu guul gaaro si magaciisa loogu xardho taariikhda kubadda cagta, maxaasa ka fiican in guushaas aad ku gaarto kulanka ugu xiisaha iyo xamaasada badan abid adduunka heer kooxeed ee El Clásico.
Inta lagu guda jiro kulanka adag soo socda ee ku dhex mari doono kooxaha Barcelona iyo Real Madrid 26-ka bishan Oktoobar horyaalka La Liga ee dalka Spain, waxaa jira in kabadan hal ciyaartooy ee labada koox ah oo doonaya inay horumariyaan, heerkooda gooldhalineen taariikhda kulamada El Clásico.
Haddaba waxaa warbixintan isbar-bardhig lagu sameeyay xaalada labada weeraryahan ugu muhiimsan kulanka El Clásico, Luis Suarez oo Barcelona ah iyo Karim Benzema oo Real Madrid ah.
Weeraryahanka reer Uruguay ee Luis Suarez ayaa ku jira kaalinta sagaalaad ee gooldhalinta ugu sarreeya kulamada El Clásico isaga oo dhaliyay ilaa iyo haatan 11 gool.
Haddii Suarez uu hal gool dhaliyo kulanka soo aadan ee ka dhici doono garoonka Camp Nou, waxay ka dhignaan doontaa inuu soo bar-bareeyo rikoorrka gooldhalineed halyeeyga kooxda Real Madrid ee Carlos Santillana, kaasoo kaalinta 8-aad kaga jira liiska xiddigaha ugu gooldhalinta badan kulamada El Clásico, isaga oo dhaliyay 12 gool.
Shaki la’aan Suarez ayaa shuraxan inuu ku soo bilaabn doono kulanka soo aadan ee El Clásico haddii uu diyaar u noqdo, sidoo kale wuxuu u qalmaa inuu sare u qaado gooldhalintiisa xilli ciyaareedkan isagoo ilaa iyoaa haatan dhaliyay 6 gool.
Weeraryahanka reer France ee Karim Benzema ayaa kaga jira kaalinta 13-aad liiska gooldhalinta kulamada El Clasico, wuxuuna ilaa iyo haatan ka dhaliyay 9 gool.
Haddii Benzema uu ku guuleysto inuu dhaliyo hal gool kulanka soo aadan ee El Clasico, wuxuu soo bar-bareyn doonaa rikoorrka gooldhalineed ee halyeeyada Josep Samitier oo Barcelona ah, sidoo kale Juan Gómez iyo Hugo Sánchez oo Real Madrid ah.